စိတ်ပညာ ဆောင်းပါးများ – Reach Out Myanmar
မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ခြင်းမှသည် မိသားစုအား ဂရုစိုက်ခြင်းဆီသို့
စိတ်ကျန်းမာရေး, စိတ်ပညာ, မိဘပညာပေးBy ROM ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 4, 2020
ကျန်းမာခြင်းဆိုတာဘာလဲ ဒီမေးခွန်းကို လူမှုစိတ်ပညာသင်တန်းပေါင်းများစွာရဲ့ အဖွင့်မှာ ကျွန်မ မေးလေ့ရှိပါတယ်။ ၉၉ %သောသူတွေဖြေတာက ကိုယ်ခန္ဓာအနာရောဂါကင်းတယ်၊ စိတ်ပျော်ရွှင်မယ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုကင်းရင် ကျန်းမာတယ်တဲ့။ ၁ % သောသူတွေက လူမှုဆက်ဆံရေးကလဲ ကောင်းဖို့လိုတယ်လို့ ဖြေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ.. ဒါတွေက ဆက်စပ်နေလို့ပါ။ မိသားစုမှာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သဟဇာတဖြစ်အောင် မနေတတ်တဲ့သူရဲ့ စိတ်ရဲ့ က ပျော်ရွှင်နိုင်မှာ မဟုတ်သလို စိတ်ထောင်းရင် ကိုယ်ကျေတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံကရှိပြန်တယ်၊ နေမကောင်းတဲ့သူကလဲ စိတ်ပျော်ရွှင်နိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ WHO ကတော့ ဒီ၃ခုကောင်းမွန်ခြင်းက ကျန်းမာခြင်းလို့ ပြောထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးနှောက်ရဲ့ အာဟာရအတွက် အသိပညာတွေ၊ ဘဝအတွက် ဗဟုသုတတွေ၊ စားဝတ်နေရေး ပညာရေးအတွက် ငွေကြေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ယုံကြည်ရာ ကိုးကိုယ်ရာ ဘာသာတရား ကျွန်မတို့ရဲ့ နေ့စဉ်လူ့ဘဝမှာ ကင်းလို့မရတဲ့…
စိတ်ကျန်းမာရေး, စိတ်ပညာBy ROM အောက်တိုဘာ 5, 2019
စိတ်ဓာတ်ကျသည့် ခံစားချက်နှင့် အောက်ပါအချက်များထဲမှာ အနည်းဆုံး (၄)ခုကို အနည်းဆုံးနှစ်ပတ် (နေ့စဉ်) သင်ခံစားနေရပါသလား သို့မဟုတ် သင့်အနားမှ လူတစ်ဦးဦးက ခံစားနေရတာကို သတိပြုမိပါသလား ထို (၄)ခုအနက် သေချင်သည့်အတွေးနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှု ပါဝင်ပါက စိတ်ကျန်းမာရေး ပညာရှင် (Psychologist) နှင့် အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။ ၁) စိတ် (ကျ) ၂) အိပ် (လျော့) ၃) စိတ်ဝင်စားမှု (လျော့) ၄) အပြစ်တင်ခြင်း ၅) အင်အား (ကုန်/ကျဆင်း) ၆) အာရုံစိုက်မှု (အားနည်း) ၇) အစာ စားချင်စိတ် (ကျ) ၈) စိတ်အလိုမကျမှုနှင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု ၉) သေချင်သော အတွေး နှင့် အားထုတ်မှု အထက်ပါ အချက်များသည် ယေဘူယျ…
စိတ်ကျရောဂါနှင့် သေကြောင်းကြံစည်မှု (၃)
စိတ်ကျန်းမာရေး, စိတ်ပညာBy ROM အောက်တိုဘာ 2, 2019
သေကြောင်းကြံစည်မှု နမိတ်ပြလက္ခဏာများ” (၁) သေပစ်လိုက်ချင်တယ် (သို့) ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာကျင်အောင်လုပ်လိုက်ချင်တယ်ဟု မကြာခဏပြောခြင်း (၂) မျှော်လင့်ထားသမျှ အကုန်ပျောက်ဆုံးသွားပြီး ဘဝသည် ထောင်ချောက်တစ်ခုထဲတွင် ပိတ်မိနေသလို ခံစားနေခြင်းကို သိသိသာသာ ပြောခြင်း (သို့) အမူအရာဖြင့်ပြခြင်း (၃) နေ့စဉ်သွားလာလုပ်ဆောင်မှုများတွင် မိမိကိုယ်ကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိအောင် တမင်တကာလုပ်နေခြင်း (ဥပမာ.. စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်များကို အမြန်မောင်းခြင်းပြီး ကားများကို မရှောင်ခြင်း၊ ကားတိုက်ခံရခြေ ရှိရက်နှင့် လမ်းကို မဆင်မခြင်ဖြတ်ကူးခြင်း) (၄) သူငယ်ချင်း၊ ဆွေမျိုးအိမ်သို့ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ အလည်သွားရောက်၍ နောက်မတွေ့ရတော့မယ်လူလို တနေရာရာကို ထွက်သွားတော့မလို နှုတ်ဆက်စကားပြောခြင်း (၅) ပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများ အကုန်နီးပါး ခွဲဝေပေးခြင်း၊ ပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်းများ လုပ်နေခြင်း (၆) ပုံမှန်မဟုတ်သော စကားများပြောခြင်း (ငါမရှိရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ၊…
စိတ်ကျရောဂါနှင့် သေကြောင်းကြံစည်မှု (၂)
ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်ကနေ ပျောက်ကွယ်သွားချင်စိတ် သင့်မှာရှိနေပြီလား????? ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဆုံးစီရင်ခြင်းဆိုသည့် အကြောင်းအရာသည် ဆွေးနွေးရင်ဖွင့်ရန် ခက်ခဲသော ကိစ္စရပ်များထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ ဘဝလမ်းတလျှောက်မှာ တကွေ့မဟုတ် တကွေ့ တချိန်မဟုတ် တချိန်မှာတော့ ဒီလိုအတွေးမျိုးဝင်တတ်လေ့ရှိပါတယ်။ သင်တစ်ယောက်တည်းမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအတွေးသည် သင့်တွင် ချွတ်ယွင်းချက်တစ်ခုခုရှိသော ကြောင့်လည်းမဟုတ်သလို သင်သည် အပြစ်အနာရှိ၍ စိတ်လွတ်နေ၍ စိတ်အားနည်းနေသော ကြောင့်လည်း မဟုတ်ပါ။ ထိုအတွေးသည် အချိန်အတော်ကြာ သင်ကြုံတွေ့နေရသော စိတ်ဒုက္ခများအား မခံစားနိုင်၊ မကျော်လွှားနိုင်တော့သောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သာ အကူအညီနှင့် စိတ်ခွန်အားပေးမှုများရလိုက်မည်ဆိုပါက အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်း အားလုံးကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ထိုအတွေးလည်း ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မည်။ အားလုံးကို လက်လျော့ပြီး ထွက်သွားတော့မယ်လို့ သင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီနေ့အထိ သင်ကြိုးစားအားတင်းပြီး နေခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို တစ်ချက်ပဲ ပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါ။…
စိတ်ကျရောဂါနှင့် သေကြောင်းကြံစည်မှု (၁)
ကျွနု်ပ်တို့သည် “စိတ်ဓာတ်ကျတယ်” ဆိုသော စကားကို မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှ လူအများ၏ မကြာခဏ ပြောဆိုသံကို ကြားဖူးနေသလို တခါတလေ ကိုယ်တိုင်ပင် ထိုစကားကို အလွယ်တကူသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကိစ္စရပ်တစ်ခုခု အဆင်မပြေဖြစ် ဖြေရှင်းမရနိုင်ဖြစ်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေ တစ်ရက် တစ်ပတ်ထက်ပိုပြီး ခံစားနေရသောအခါ “စိတ်ဓာတ်ကျတယ်” ဟု စကားကို နှုတ်က ငြီးတွားလာကြ ရပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများရာကနေ စိတ်ဓာတ်ကျသည့် ခံစားချက်ကို ရရှိလာပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ စိတ်ကျရောဂါကို ရရှိလာကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သေကြောင်းကြံစည်/အောင်မြင်မှုများ၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းများသည် စိတ်ကျခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ စိတ်ပျက်ခြင်း၊ စိတ်အားငယ်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက်ကုန်ဆုံးခြင်းစသည်တို့ ရက်ရှည်ကြာ ခံစားနေရခြင်းသည် လူတစ်ယောက်အား ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေခြင်းသည် ထိုနာကျင်သည့် ခံစားချက်များမှ လွတ်မြောက်ရာလမ်းဟု အထင်ရောက်စေသည်။ သေပစ်လိုက်ချင်သော အတွေးနှင့် သေကြောင်းကြံစည်မှုများသည် စိတ်ကျရောဂါ၏ နောက်ဆုံးအဆင့် လက္ခဏာများဖြစ်သည်။…
အုပ်ထိန်းသူ/ပြုစုစောင့်ရှောက်သူပုံစံ (၃) >> အလိုလိုက်ခြင်းဖြင့် အုပ်ချုပ်ခြင်း
မိဘပညာပေးBy ROM ဧပြီ 8, 2019
ဒီမိဘမျိုးသည် သားသမီးများအပေါ်တွင် စည်းကမ်းချမှတ်မှု အလွန်နည်းပါးသည့်အပြင် သူတို့ဖြစ်စေချင်သည့် ဘဝ၊ပုံစံများလည်းမရှိပေ။ ဤမိဘမျိုးသည် ကလေးများကို ဘာဖြစ်ရမည်ဟု တောင်းဆို ပြောဆိုခြင်းထက် ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာပဲ အာရုံစိုက်တတ်ကြသည်။ သူတို့သည် အခြားအုပ်ချုပ်ပုံစံမှ မိဘများထက် သားသမိီးများအပေါ် ချစ်လွန်းခြင်း၊ စိတ်ရှည်သည်းခံလွန်းခြင်း၊ ကလေးအတွက် ရေရှည်ကောင်းသည် ဆိုးမည် မစဉ်းစားပဲ အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင် ဖူးဖူးမှုတ်ထားလွန်းခြင်းတို့ကြောင့် ကလေးများ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းကျောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် ရင့်ကျက်မှုရှိခြင်း မရှိခြင်းအပေါ်တွင် စိတ်မဝင်စားပေ။ ထို့အပြင် ကလေးများ ဖြစ်ချင်/လုပ်ချင်သည့် ဆန္ဒများကိုမည်သည့်အခါမှ အတိုက်အခံလုပ်၍ မငြင်းဆိုတတ်ပဲ မျက်နှာတချက် အညိုမခံပေ။ ဤမိဘမျိုးသည်~ ~~ – ပြုမူ ပြောဆိုနေထိုင်ခြင်း အတတ်ပညာအတွင် စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက် အနည်းငယ်(ရှိသည်ဆိုရုံ) သာရှိခြင်း – စည်းကမ်းရှိခဲ့ရင်တောင် အမြဲတမ်းနီးပါး ဖြေလျော့ပေးခြင်း –…
အုပ်ထိန်းသူ/ပြုစုစောင့်ရှောက်သူပုံစံ (၂) >> စည်းကမ်းများဖြင့် အုပ်ချုပ်ခြင်း
အုပ်ထိန်းသူ/ပြုစုစောင့်ရှောက်သူပုံစံ (Parenting Style) II >> စည်းကမ်းများဖြင့် အုပ်ချုပ်ခြင်း ဤမိဘမျိုးသည် ၎င်းတို့၏ကလေးများအား ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ရာတွင် အကြောင်းအရင်းသေချာစွာလုပ်နိုင်အောင်နှင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရပ်တည်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ပေးသည်။ သို့သော်လည်း သူတို့၏ကလေးများအပေါ်တွင် ကြီးမား/မြင့်မားသော မျှော်လင့်ချက်/မျှော်မှန်းချက်များ ထားရှိသည်။ သင်တင့်စွာ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို ကလေးများက ချိုးဖောက်ခဲ့ပါက စည်းကမ်းအတိုင်း အရေးယူ ဆုံးမလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ဤမိဘမျိုးသည် ကလေးများအား မည်သည်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်/လုပ်ခဲ့သည်/မှားခဲ့သည်ကို ရှင်းပြခွင့်ပေးပြီး အခြေအနေအပေါ်မူတည်၍ လိုက်လျော ပြုပြင် ဆုံးမကြသည်။ ၎င်းတို့သည် စံပြအဖြစ် မိသားစုအတွင်း နေထိုင်ပြီး ကလေးများကိုလည်း သူတို့အတိုင်းဖြစ်လာရန် မျှော်လင့်ချက်ထားပြီး ကလေးများကိုလည်း ရှင်းပြပြောဆိုကာ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာစေသည်။ ဤမိဘမျိုးသည် ၁) ကလေးများပြောသည်ကို သေချာစွာ နားထောင်သည် ၂) ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရပ်တည်နိုင်အောင်…
အုပ်ထိန်းသူ/ပြုစုစောင့်ရှောက်သူပုံစံ (၁) >> အာဏာဖြင့် အုပ်ချုပ်ခြင်း
သြဇာ အာဏာသုံး မိဘများသည် ၎င်းတို့၏ ကလေးများအပေါ်တွင် ကြီးမားသော/မြင့်မားသော မျှော်လင့်ချက်/မှန်းချက်များ ထားရှိပြီး ကလေးများသည် အထွန့်တက်ခွင့်မရှိပဲ သူတို့ချပေးသော စည်မျဉ်း၊ လမ်းများ အတိုင်း လိုက်နာလျှောက်လှမ်းရသည်။ ကလေး၏ ဖြစ်ချင်သော ဆန္ဒကို မမေးမြန်းသည့်အပြင် မည်သည့်ရွေးချယ်ခွင့်ကိုမှ မပေးကြပေ။ ထိုမိဘမျိုးသည် သူတို့၏ ပြောဆိုလုပ်ဆောင်စေလိုသမျှကို ကလေးများအား အမိန့်ပေး၍ အတိအကျလိုက်နာစေသည့်အပြင် ၎င်းတို့ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများအကြောင်းကို ရှင်းပြပြောဆိုရန် ဆန္ဒမရှိကြပေ။ အပြစ်ပေးသောအခါ (အထူးသဖြင့် )ဘာကြောင့်ဆိုတာ လုံးဝမရှင်းပြခြင်း (သို့) အနည်းငယ်သာ ပြောပြတတ်သည်။ နွေးထွေးမှုနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကလေးများအား လုံးဝမဖော်ပြတတ်ပေ။ (ဤနေရာတွင် အချို့မိဘများ၏ လွဲမှားသော အတွေးမှာ စိတ်ထဲကပဲ ချစ်မည်၊ လိုတာဖြည့်ပေးခြင်းသည် ချစ်ခြင်းကို ပြခြင်းဖြစ်သည်၊ ကလေးများနှင့် အရောဝင်ရင် ရောင့်တတ်တတ်သည်၊…
ဒီကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို မိဘဖြစ်တဲ့သင်တို့တွေ စဉ်းစားမိရဲ့လား.. အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ.. မိသားစုမှာ စကားများတာ.. အငြင်းပွား.. ရန်ဖြစ်တာဟာ မဆန်းပဲပေမယ့် ကလေးတွေရှေ့မှာ မဖြစ်တာဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ.. မြန်မာလူမျိုးတွေ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေ အကြည့်များကြမှာပါ.. သူတို့အမြဲသုံးတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်.. ” ကျန်းမာပျှော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုက ကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးနဲ့ပဲ အိမ်ထောင်ချပေးစေချင်တယ်” ကြောက်လန့်မှုတွေ၊ မလုံခြုံမှုတွေ၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အမူအရာတွေကြောင့် သူတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပြောဆိုပြုမှုနေထိုင်မှု အတွေးအခေါ်တွေပေါ် အများကြီးပြောင်းလဲသွားစေလို့ပါပဲ.. မေတ္တာငတ်ခဲ့တဲ့ ကလေးဟာ.. မေတ္တာမထားတတ်ဘူး.. နွေးထွေးမှု မရခဲ့တဲ့ကလေးဟာ.. နွေးထွေးမှုမပေးတတ်ဘူး.. အချစ်မခံရတဲ့ ကလေးဟာ မချစ်တတ်ဘူး..(ဒါတွေဟာ အများစုမှာဖြစ်လာကြတာပါ.. ချွင်းချက်တွေတော့ရှိပါတယ်.)
သင့်ချစ်ခြင်း မေတ္တာကရော အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတာလား၊ မွန်းကျပ်စေတာလား
စိတ်ပညာBy ROM ဧပြီ 8, 2019
တစ်ဦးက တစ်ဦးကို ချစ်တာ.. ဂရုစိုက်တာဟာ သာမန်သဘောအရ ကောင်းတဲ့အရာ တစ်ခုပါပဲ။ လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လို မေတ္တာမျိုးမဆို (၁၅၀၀၊ ၅၂၈) ထားရှိဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စမှ မဟုတ်တာပဲ။ သို့သော်ငြား မေတ္တာတရားများလို့ ချစ်တာတွေ ပိုပေးမိတဲ့အခါ တစ်ဖက်လူမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိတတ်တာကိုတော့ လူအများစုက သတိမထားမိကြပါဘူး။ ကိုယ့်လူနာတွေထဲမှာတင် လွန်ကဲတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကြောင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး။ လူမှုရေးတွေ ထိခိုက်မှု၊ တိုးတက်မှုမှာ အဟန့်အတားတွေ အများကြီး ခံစားကြုံတွေ့နေရတာတွေ ရှိပါတယ်။ မြန်မာစကားပုံအရ “ စေတနာက ဝေဒနာဖြစ်တယ်” ပေါ့။ ပေးတဲ့သူကိုလဲ အပြစ်မတင်နိုင် ခံစားရတဲ့သူဘက်ကလည်း မသက်သာတော့ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးဖြစ်စေ တဖက်ဖက်ကဖြစ်စေ စိတ်ပိုင်းဆို်င်ရာ ဝေဒနာကို ခံစားရတော့တာပါပဲ။ နှစ်ဖက်စလုံးက မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်…